Maungtintyin: ရန်လိုမှုများ ဖယ်ရှားခြင်း
ငြိမ်းချမ်းမှုဟာ အကြမ်းဖက်ခြင်းရဲ့ ပျက်ကွက်ခြင်းမျှသာ မဟုတ်။ အဲဒါဟာ သူ့ ရဲ့ ရင်းမြစ်များ၊ စိတ်မှာ စွဲထင် နေတဲ့အရာများနဲ့တကွ ရန်လိုမှုရဲ့ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ရပ်နားခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာပညာရပ်နယ်ပယ်မှာ စိတ်ရဲ့အခြေအနေ၊ လုံဝငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်အတွက် နိဗ္ဗာန်ဝေါဟာရကို သုံးစွဲလေ့ရှိပါတယ်။
ဘာသာရေးများရဲ့ ကျင့်သုံးမှုပန်းတိုင်ဟာ လွတ်မြောက်ခြင်းဖြစ်ပေမယ့် အခြားပန်းတိုင်များလည်း ရှိပါသေးတယ်။ သင်ဟာ အခြားသတ္တ၀ါများရဲ့ကောင်းကျိုးကို တွေးတောရပါမယ့်။ အာရုံခံစားနိုင်, အာရုံမခံစားနိုင် ၊ အသိရှိ, မရှိ နှစ်ခုလုံးရဲ့ ကောင်းကျိုးအတွက် အလုပ်လုပ်ရပါမယ်။ အသုံးဝင်ရပါမယ်။ အနန္တစကြ၀ဠာအတွက် ကောင်းကျိုးကို ဆောင်ရွက်ခြင်းဟာ မြတ်ဘုရားသာသနာရဲ့ တကယ့်အနှစ်သာရဖြစ်တဲ့ သတင်းစကားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
စစ်မှန်တဲ့ဘ၀တစ်ခုအတွက် ကျယ်ပြန့်တဲ့အတွေးအခေါ်များနဲ့ စံနမူနာကောင်းများကို ဘယ်လို အသုံးချမလဲ? အဦးအစဟာ အလေးထားရမယ့်အရာကို ရင့်ကျက်စေဖို့ပါ။ အဲဒီနောက် ကိုယ်ပိုင် အမြင်များထက် အခြားသူများရဲ့အမြင်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့ပါ။ ပထမဆုံးလိုအပ်ချက်ဟာ အမြင်များကို ကျဉ်းမြောင်းစွာကန့်သတ်မထားဘဲ ကျယ်ပြန့်စွာ ရှု့မြင်သုံးသပ်ဖို့ပါ။
ရန်လိုမှု၊ တိုက်ပွဲ၊ ပြိုင်ပွဲရဲ့ သဘောထားတစ်ခုကို ရပ်တည်ထားလျင် အကောင်းဆုံးစံများဟာ ဘယ်လောက် မြင့်မားနေပါစေ အရေးကိစ္စမဟုတ်တော့ပါ။ အဲဒါတွေဟာ လက်တွေ့အားဖြင့် နေရာတစ်ခုခုကိုမှ ဦးတည်စေလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သဘောတရား၊ ဘာသာရေးနဲ့ ဖီလိုဆိုဖီအမြင်များဟာ သင်ကြားထားတဲ့ ဘာသာရပ်များပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒါတွေကို နေ့စဉ်ဘ၀ရဲ့အပြုအမူထဲ ရယူသယ်ဆောင်လာရပါမယ်။ ဘာသာရေး ဒါမှမဟုတ် ဖီလိုဆိုဖီနဲ့ဆက်စပ်တဲ့အခြေအနေများ တိုးတက်လာဖို့အတွက်တောင် မှန်ကန်တဲ့သဘောထားဟာ အနှစ်သာရပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ရန်မလိုမှုနဲ့ အကြမ်းမဖက်မှုများဟာ ကြောင်းကျိုးမဲ့တဲ့ ပျော့ပျောင်းညင်သာမှု ဒါမှမဟုတ် ကျိုးနွံနာခံမှု ဖြစ်သင့်တယ်လို့ ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဘာသာရေးများကတောင် ကြောင်းကျိုးမဲ့စွာ ရန်လိုလာတဲ့သူများနဲ့ ဘယ်လို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမယ်ဆိုတာကို သင်ကြားပေးပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာမှာတော့ ဒါကို ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှုရဲ့ လက်တွေ့ လုပ်ဆောင်ခြင်းလို့ ခေါ်ပါတယ်။ မြတ်ဗုဒ္ဓက အမြဲတမ်းကျိုးနွံရမယ်ဆိုတာကို မိန့်မထားပါ။ သဘောထား မတိုက်ဆိုင်သူများနှင့်အပေးအယူလုပ်ရာမှာ ကျွမ်းကျင်သင့်ပါတယ်။ အဲဒီနောက် သဘောထားဟာ မှန်ကန်တယ်၊ ညင်သာတယ်၊ ဖော်ရွေတယ်၊ ပြိုင်ပွဲလဲမဟုတ် တိုက်ပွဲလဲမဟုတ်ဘူးဆိုယင် အဲဒီအပေးအယူလုပ်ခြင်းဟာ အမြဲတမ်းအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာက ဓမ္မဟာ အစ အလယ် အဆုံး သုံးခုလုံးမှာ ကောင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အလားတူ ငြိမ်းချမ်းမှုနှင့်ညီညွတ်မှုအတွက် သင့်တော်တဲ့အခြေအနေကို မဖန်တီးတဲ့အခါ အတွင်း, အပြင် နှစ်ခုလုံးမှ ငြိမ်းချမ်းမှုနဲ့ ညီညွတ်မှုဟာ ရောက်မလာနိုင်ပါ။ အဲဒီနောက် အကျွန်ုပ်တို့ထံမှလာတဲ့ မလိုလားအပ်တဲ့ အပြုအမူများက ငြိမ်းချမ်းဖို့လမ်းညွန်ထားတဲ့အခြေအနေများကို နှောင့်ယှက်လို့မရအောင် သတိထားဂရုစိုက်ရပါမယ်။ ငြိမ်းချမ်းမှု,ညီညွတ်မှုစံများနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်သင့်တဲ့ သတ္တ၀ါတစ်ခုလုံးလို့ ဆိုလိုတဲ့ အတွင်း အပြင် ကမ္ဘာအကြား ညီညွတ်မှုများ ရှိသင့်ပါတယ်။
ငြိမ်းချမ်းမှုဟာ တံခါးမများ၊ ပြတင်းပေါက်များကို ပိတ်ထားယုံ၊ အထဲသို့ဝင်လာတဲ့ အနှောင့်အယှက်အသံများကို ခွင့်မပြုယုံမျှဖြင့် ရရှိလာနိုင်တဲ့ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတဲ့ အခြေအနေတစ်ခုတော့ မဟုတ်ပါ။ စစ်မှန်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းမှုရဲ့စမ်းသပ်စစ်ဆေးချက်ဟာ နှောင့်ယှက်နေတဲ့လေထု ဖြစ်ပေမယ့် ငြိမ်သက်မှုကို ထိန်းထားနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ အခါမျိုးမှာ ရောက်လာပါတယ်။
ဆန့်ကျင်ဘက်အနေအထားအတွင်းမှာပဲ ငြိမ်သက်မှုကို ထိန်းသိမ်းရခြင်းအတွက် လျိုဝှက်ချက်ရှိပါသလား? အဖြေကတော့ မိမိရဲ့စိတ်ကို တိုးတက်စေဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ လူသားရဲ့စိတ်ကို မြှင့်တင်ခြင်းဟာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆက်စပ်နေတဲ့ ဘာသာရပ်နဲ့ပတ်သက်လို့ ပြောဆိုခြင်းများပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆင့်များစွာ ရှိနိုင်ပါတယ်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တိုးတက်လာခြင်းရဲ့ စစ်မှန်တဲ့ အရိပ်လက္ခဏာဟာ မာန်စွယ်ကျိုးလာပြီး အကျွန်ုပ်တို့ ပတ်လည်ရှိ အရာဝတ္ထုများနဲ့ပတ်သက်လို့ တစ်ဦးကိုတစ်ဦး အမှီပြုနေတဲ့သဘာဝကို သတိမူ သိရှိလာနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တိဘက်တန် ဗုဒ္ဓဘာသာကပြောတဲ့ စကားပုံတစ်ခုကတော့ - အတိတ်က သင်ပြုခဲ့တဲ့အပြုအမူနဲ့ ပတ်သက်လို့ သင်သိချင်ယင် သင်ရဲ့မျက်မှောက်ခန္ဓာကိုယ်ကို ကြည့်ရှု့ပါ။ သင်ရဲ့အနာဂတ်ကံကြမ္မာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင်သိချင်ယင် သင်ရဲ့ယခုလက်ရှိစိတ်ကို စောင့်ကြည့်ပါ။ - ဒါ့ကြောင့် အကောင်းဆုံးမနက်ဖြန်ဖြစ်ဖို့ မှန်ကန်တဲ့ သဘောထားနဲ့ အကောင်းဆုံးယနေ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် တွေးပါ၊ အလုပ်လုပ်ပါ- ဆိုတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Maungtinyin (မောင်တင့်ယဉ်) at Tuesday, October 26, 2010